Dhalinyaro Soomaaliyeed oo markale maanta lagu xukumi doonno maxkamadda dalka Hindiya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo markale maanta lagu xukumi doonno maxkamadda dalka Hindiya
Waxaa maanta oo Jimco ah markale lagu wadaa in dalka Hindiya maxkamad lasoo taago dhalinyaro Soomaaliyeed oo fal burcad badeednimo ah lagu soo eedeeyay.
Dhalinyaradaasi Soomaaliyeed oo gaaraya 119 qof ayaa dowladda Hindiya sheegtay in 50 ka mid ah ay wajahi doonaan xukun dil ah, inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay Hindiya kala hadleen sidii ay xukunkaasi dilka ah uga qafiifin lahaayeen dhalinyaradaas.
Dhinaca kale, xeer-ilaaliyaha qaranka Soomaaliyeed Axmed Cali Daahir ayaa dhawaan sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya ay haatan u socdaan wada-hadalo ku aadan dhalinyarada Soomaalida ah oo lagu wado in dalkaasi Hindiya lagu xukumo.
Xeer-ilaaliye Axmed Cali Daahir ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Hindiya laga dalbaday in dhalinyarada Soomaaliyeed ee xukunka kala duwan lagu xukumay laga qafiifiyo xukunka islamarkaana lagu soo wareejiyo dowladda federaalka Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiro ahaan gaaraya ilaa 50 qof, ay dowladda Hindiya dil ku xukuntay, taas oo la sheegay in markii dambe ay noqotay mid aan waxba ka jirin.